जुनु आमाको न्यानो काख र ईशा दिदिको आशिर्वाद: क्यान्सर पिडितले पाए सहयोग - koselihk
जुनु आमाको न्यानो काख र ईशा दिदिको आशिर्वाद: क्यान्सर पिडितले पाए सहयोग
Posted by koselihk | १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:४८ | यथार्थ जिवन कथा |0|
by koselihk | १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:४८ | यथार्थ जिवन कथा |0comments
आमा सहारा हो ! आमा प्रेम हो ! आमा भविष्य हो ! आमा संसार हो । अब त्यहि सब थोक ‘आमा’ नभए के हुन्छ ? त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।
तर पनि सुसारे आमाहरुको सुन्दर कथा भेटिने देश हो नेपाल । जहाँ आमा नहुने टुहुराहरुलाई न्यानो काख मिल्ने महान आमाहरुको गाथा भेटिन्छ। अर्थात दुनियाँमा अमुल्य आमाको साइनो कहिँ कतै भेटिदैन तर अमुल्य आमाको साइनो हाम्रै देश नेपालमा भने पाइन्छ ।
यस्तै महान आमाको पंक्तिमा भेटिने जुनु र इशाको समाजसेवा तथा कर्म थाहा नहुने नेपाली सम्भवत कमै छौ । जिन्दगीका आफ्ना दिन र रातहरुलाई समाज सेवामा डोर्याउदै, बिलाउदै गरेका जिबनको भबिष्य देखाउने निश्वार्थ आमाहरु हुन् जुनु र इशा ।
देशमा गरिबी थियो । गरिबी हटाउन परिवर्तनका नाममा ठुलो द्वन्द्व भयो, द्वन्द्वमा बाबा आमाहरु मारिए, उल्टै बालबालिकाहरु टुहुरा बने । कल्पनाको डिलमा बसेर पुर्पुरोमा हात राखेर सोंचौ त ? अजीवको पौराणिक कथा जस्तो लाग्छ, देशका टुहुरा र अनाथहरुको वास्तविक कथा ।
त्यसमाथि पनि भूकम्पको बज्रपात, अनि त्यहि बज्रपातमा हराएका आमाबाबाहरु, अनि झनै थपिएका तिनै टुहुराहरु । अस्थिर राजनीतिको चपेटामा दुखि रहने आमाका मनहरु, अनि तिनै अनाथ जिन्दगीहरु, गरिबीले दिएका उपजहरु हुन् ।
यी सब हेर्दा चारैतिर अन्धकार झैँ लाग्छ तर यिनै महान आमाहरुलाई देख्दा मानवीय भावानाहरु हर्षको छलाङ मार्दै अंकमाल गर्छन र दुखिहरुको मनमा खुसि फुराउ छन् अनि जिउने आधार बन्छन ।
यहाँ जुनु र इशा जस्तै थुप्रै महान आमाहरु पनि छन् । जो अभावको जिन्दगि बोकेर मर्न तयार जिबनहरुलाई ज्युउने आधार दिइ रहेका छन् । तिनै आमाहरुलाई साथ दिने महान हातहरु पनि छन्, जसको कारण नयाँ जीवन पाएका छन् ।
क्यान्सर पिडितलाई इशा गुरुङको आर्थिक सहयोग
खोटाङका रामदास राई गलैँचा बुनेर घरधन्दा चलाउथे । विगत ५ वर्ष देखि क्यान्सर रोगबाट पीडित भएपछी आर्थिक अबस्था निकै कम्जोर भएको कारण उपचार गर्न सकेनन । क्यान्सरले थलिदै गएपछि राईका छोरा र छोरी पनि स्कुल जान पाएनन् । छोराछोरी स्कुल जान नपाएको खबर संचार माध्यममा आएपछी एकीकृत सिर्जनशिल समाजका अभियन्ता तथा अनाथहरुकी आमा भनेर चिनिने जुनु पुनको टोलीले उद्दार गर्यो ।
तिनै छोरा छोरीको रेखदेख र पठनपाठन सबै जुनु आमाको सिर्जनशील समाजले हेर्ने भएको छ । आर्थिक अभाबमा उपचार नपाएका रामदास राईको नाजुक अवस्था देखेर जुनु पुनको पहलमा उपचार थालियो । जुनुपुनको हारगुहार देखेर बेलायतकि मनकी धनि इशा गुरुङको मन चसक्क छोयो, अनि प्रण गरिन सहयोग गर्नुपर्छ ।
दुखले घेरेर ल्याउदा भगवान जस्तै सम्झिने नाम हो ‘इशा गुरुङ’ । सामाजिक संजालमा ‘इशा गुरुङ’ एक सेलिब्रिटी ब्रान्ड नै बनेको छ भन्दा हुन्छ । बेलायतमा रहेकी पोखरेली चेली इशा गुरुङ हरेक बखत समाज सेवा गर्दै आएकी छन् ।
इशा गुरुङले रामदास राईको क्यान्सर उपचारका लागि १० दिने सहयोग अभियान चलाईन । इशा गुरुङको आग्रहमा देश बिदेशमा रहेका मनकारी दाताहरुले साथ् दिए । केवल १० दिनको छोटो अवधिमै २ लाख ४२ हजार ५ सय सयोग रकम उठ्यो । उक्त रकम उपचार जुटेकी जुनु पुनलाई हस्तान्तरण गरिन र जुनु आमाले इशालाई महान समाजसेवी आमा भन्दै खुसीको सन्देश पठाईन ।
यसरि के जात, के धर्म, के रंग, केहि नभनी दुखिगरिवलाई सहयोग गर्ने इशा गुरुङले संसारभरी रहेका सहयोगी मनहरू संगै जुटेर सहयोग गर्दै आएकी छिन । पीडितका लागि उनको सहयोग भगवानको बरदान सरह बन्ने गरेको छ ।
कैयौ दुखि र असक्तहरुलाई देश बाहिरबाट इशा आमाले उद्दार गरेकी छिन । भूकम्प जाँदा होस् या बाढी पहिरो आउदा होस् अथवा बृद्द आश्रममा पुगेर होस् सुसारे आमा बनेर सेवा गरिरहेकी छन । यिनै महान समाजसेवी इशा गुरुङको सहयोगले धेरैले नयाँ जीवन पाएका छन् ।
टुहुरालाई जुनु आमाको न्यानो काख
टुटेका जिन्दगीहरुको गास बास जुटाई दिएर खुसि बाँड्ने जुनु आमाले ४० भन्दा धेरै टुहुराहरुलाई उनको एकीकृत सृजनशील समाजले रेखदेख गरिरहेको छ । जुनु आमाको उक्त न्यानो बास भित्र अनाथहरुका भविष्यका आँकुराहरु पलाई रहेका छन् ।
रामदास राई क्यान्सर बाट थलिएपछि स्कुल जान नपाएका उनका छोरा छोरीलाई जुनुले आफ्नो अनाथ आश्रममा राखेकी छन् । अब ति छोराछोरी पनि स्कुल जान पाउने भएका छन् । उनको अनाथालयलाई देश बिदेशमा बस्ने मनका धनि मनकारीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । तिनै मनकारीहरुको भरमा जुनु आमाको आश्रमको चुलो जलिरहेको छ ।
यदि यस्तै सहयोगी हातहरु नभेटिएमा भने चुलो धुवाउन छाड्ने छ र भविष्य खोज्ने मुनाहरु बिचल्ली हुने छन् । तसर्थ टुहुरा अनाथहरुका लागि जुनु आमाको न्यानो काख बचाई रहन दयालु हातहरुको खाँचो छ ।
आशा छ, संसारभरीबाट यसरी नै अझै सहयोग भइरहने छ र टुहुरा अनाथहरुको न्यानो काख अन्ततः तपाई कै महान हातहरु हुनेछन, सक्दो सहयोग गरौ ।
केबी गुरुङ बाट
” चुवाको बोटमा पिङ र जुत्ताको सपना ” ( कथा ) -लक्ष्मण सिटौला
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार २२:२५
काठमाणडौ पढ़न आएका अपाङ्ग बालक घस्रिएर माग्दै हिड्नुको पिडा यस्तो छ।
७ चैत्र २०७४, बुधबार ०८:३१
४ भाद्र २०७३, शनिबार १४:३०